ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : (7)7th April (I had bad day)
မနက်အစောကြီးထပြီးကားဂိတ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ်။ အလင်းရောင်ရှင်းရှင်းမမြင်ရတဲ့ မှုန်ပြပြဓါတ်တိုင်တွေရဲ့ အားကိုးနဲ့ လျှောက်လာခဲ့တယ်။ လမ်းတလျှောက် ဘုရားဂုဏ်တော်၊တရားဂုဏ်တော်နဲ့ သံင်္ဃာဂုဏ်တော်တို့ ကိုရွတ်လာခဲ့တယ် ။ ကားမှတ်တိုင်ရောက်လုနီး။မိနစ် ၂၀လောက်လမ်းလျှောက်အပြီးမှာ ခွေး၃ကောင်ကျောင်းတဲ့ လူ ကိုတွေ့ မှ အကြောက်ပြေသွားတယ် ။
ရဲစခန်းရှေ့ ကမှတ်တိုင်မှာ ဘစ်စကားစောင့်ရတယ် ကိုယ့်မြို့ ပေါ်ကိုသွားတဲ့ဘစ်ကားကအစောကြီးမထွက်လို့ တခြားမြို့ သွားတဲ့ဘစ်ကို စောင့် ရင်း ရဲစခန်းမျက်နှာစာတယ်လီဖုန်းနဲ့ ကပ်ထားတဲ့စာ က
"When this police station is closed you should make all enquires using the telephone below. Please lift the handset, press the button and wait foraresponse."
တဲ့။ ရဲစခန်းကိုကြည့်တော့ မီးတွေကလင်းထိန်လို့ ။ ကားကို မိနစ် အနည်းငယ်စောင့်ပြီး နောက်တမြို့ မှာ ရထားချိန်းတယ် အဲဒီနောက် မြို့ ကြီးကိုေ၇ာက်တော့ မနက် ၇နာရီ ၄၅မိနစ်၊ မြေပုံအားကိုးနဲ့ သွား၇မဲ့ ရုံးကိုရှာတယ်။ လမ်းတို လေးတွေကများတော့ မျက်စေ့ လည်ပြီး မတွေ့ နိုင်ဘူး။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေရယ်။ သတင်းစာအလကား လိုက်ပေးနေတဲ့ အဖိုးကြီးရယ်။ vitaminဖျော်ရည် အလကားပေးနေတဲ့ ကြော်ငြာကားရယ်ကိုမေးတယ်။ လူတွေက လုပ်လက်စအလုပ်တွေကိုရပ်ပြီး သေသေချာချာ findout လုပ်ပေးကြပေမဲ့ ကျမသွားမဲ့ ရုံးကိုသူ တို့ သေချာမညွန်တတ်ကြဘူး။
လမ်းတွေမှားပြီးနောက် မှာ Indian နဲ့ တူတဲ့ ရုံးသမားဖြစ်ဟန်တူတဲ့ လူတယောက်ကို မေးမိတယ်။ အဲဒီလူက သူသွားမဲ့ လမ်းနဲ့ တကျောထဲဘဲဆိုပြီး ကျမကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ်။ ကျမကလမ်းပျောက်နေတာ မိနစ် ၃၀ ရှိသွားပြီ လို့ ပြောတော့ အံသြပြီး ဒီမှာကဒီလိုဘဲ နောက်ဆိုမမှားတော့ပါဘူးတဲ့။ ကျမကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတော့ ကျွန်တော့် ကိုဆုတောင်းပေးဦးတဲ့ ။ ဘာမှန်းတော့ကျမ မသိတော့ haveanice day လို့ ပြောခဲ့တယ်။
ရုံးအောက်ရောက်တော့အမည်စရင်းသွင်းပြီးရုံးရှေ့ မှာစောင့် တယ်ရုံးက ၉နာရီဖွင့်၇မယ်ဆို ပေမဲ့ လူအရိပ်အရောင်ကို ၉နာရီခွဲ အထိမမြင်ရဘူး။ ရာသီဥတုက အရမ်းအေးတော့ခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ allstar ဖိနပ်ပါးထဲကကျမရဲ့ ခြေချောင်းတွေ ကျဉ်ပြီး ပူးကပ်နေလို့ ခြေထောက်ကိုခဏခဏ shake လုပ်နေမိတယ်။
၉နာရီ၄၀လောက်မှာ ရုံးက ဒရ၀မ်ပုံစုံလိုလို ။ officer လိုလို ပါကစ်စတန်လို လူက အလကားနေ၇င်းအားလုံးကို ဟောက်နေတာနဲ့ ငို ချင်ရက်လက်တို့ ဖြစ်နေတယ် ။ queue ပြန်လုပ်ဖို့ သူကပြောတော့ ကျမမုန်းတဲ့ နိုင်ငံက လူ (ယောက်ကျား)များဟာ ကျမတို့ မိန်းခလေးတွေကို တွန်းတိုက်ပြီး ရှေ့ေ၇ာက်အောင်တန်းစီ ကြတယ်။ အရင်နာမည်စရင်းရေးတုန်းက ကျမ က နံပါတ် ၆ အခုကျတော့ နံပါတ် ၃၀ကျော် နောက်ဆုံးမှာ။ ကျမနဲ့ အတူ မိန်းခလေးတွေအကုန်လုံး နောက်ဆုံးမှာ အဲဒီရုံးက တနေ့ ကိုမှ လူနည်းနည်းဘဲတွေတာ။ ကျမလက်လျှော့ပြီး မြို့ ထဲဘက်ကို ထွက်လာခဲ့တယ် ။ လမ်းမှာ မျက်ရည်ဝဲတယ်။ ငါ့ အနှဲ နော် အဆင်မပြေချင်တော့များဆို ပြီ။
နောက်ထပ်ကားတဆင့်စီးပြီး လက်မှတ်ထိုး၇မဲ့ ရုံးကို ရောက်တယ်။ ကျမရဲ့ သတ်မှတ်ချိန် က နေ့ လည် ၁နာ၇ီမှ ကျမေ၇ာက်တာက ၁၁နာရီလောက်မှာ အဲဒီမှာလဲ ဒရ၀မ်မ က ကျမကိုစိမ်းစိမ်းကြည့်ပြီး နင်ဝင်လို့ မရဘူးပြောတယ်။ အဲဒီရုံးကနေထွက်ပြီးကားဂိတ်ကို လမ်းလျှောက်ရင်ကျမ မျက်ရည်တွေ ထိန်းမရအောင် ကျလာတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကိုဖုန်းဆက်ပြောတော့ ။ သူငယ်ချင်းက ကားပတ်စီးနေ ငိုတာကိုရပ်။ မြို့ ထဲကကြာကြာထိုင်လို့ ရမဲ့ first food ဆိုင် သို့ မဟုတ် coffee ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးအချိန်ဖြုန်းဖို့ အကြံပေးတယ်။ ကျမလေ ဘာ့ကြောင့်အဲဒီလောက် ၀မ်းနည်းမှန်းမသိဘူး။
အိမ်ကိုပြန်ေ၇ာက်တော့ ညနေ ၅နာ၇ီခွဲပြီ။ ရင်ထဲမှာ အရမ်းကိုနာပြီးမောတယ်။ ကျမလေ အသက်အရွယ်နဲ့ ညီတဲ့ ရင့်ကျက်မှု တွေ ။ ခံနိုင်ရည်တွေရှိချင်တယ်။ ဒါတွေ အားလုံး က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် built လုပ်ရမှာနားလည်ထားပေမဲ့ ကျမခုထိ အားငယ်တတ်တုန်းဘဲ။